I-27 YETONI ENTLE YOMHLABA YOYILO LWEGUMBI LOKUPHILA - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila I-27 yeToni entle yoMhlaba yoyilo lweGumbi lokuPhila
I-27 yeToni entle yoMhlaba yoyilo lweGumbi lokuPhila
Apha ngezantsi sabelana ngetoni entle yomhlaba yoyilo kwigumbi lokuhlala kulungelelwaniso lweendlela, imibala kunye nokugqitywa.
Sebenzisa izikimu zombala weethoni zomhlaba zihlala zongeza ukufudumala, ukucoceka kunye nokubuyisela umva kumbono waso nasiphi na isithuba. Kuba imibala yomhlaba ayithathi cala, ikhangeleka intle xa idityaniswe phantse nawo nawuphi na umbala, isenza ukhetho olufanelekileyo kwizithuba eziqhelekileyo. Ukuba ukutshintsha izinto zefanitshala kuphuma kuhlahlo-lwabiwo mali, ukupeyinta ngokulula iindonga ngepeyinti yethoni yomhlaba kuya kuthi kwangoko kunike imeko efudumeleyo kuyo nayiphi na indawo yokuhlala. Olunye uncedo lokusebenzisa imibala yepeyinti yethoni yomhlaba kukungqinwa komtsalane ongenasiphelo kunye nokungafani. Ungadlala ujikeleze ngee-shades ezahlukeneyo kunye neetoni, kwaye ayisoze yaphuma kwisitayile, isenza utyalo-mali olufanelekileyo kunye nokuzikhethela ngokufanelekileyo.
Kumfanekiso ongasentla umbala othambileyo wepeyinti weendonga wongeza nje isixa esifanelekileyo semfudumalo kwisithuba, esikwanabantu abaninzi abaneziqwenga zefanitshala ezineetoni zomhlaba. Umbala we-beige usetyenziswa nakwisilingi, ukuwenza ume ngaphandle.
Imibala yepeyinti yethoni yomhlaba yegumbi lokuhlala
Xa ukhetha umbala wepeyinti kwigumbi lakho lokuhlala, soloko ucinga ngombala weefenitshala zakho kunye nezixhobo. Kwiiprojekthi eziqala ekuqaleni, umbala wepeyinti unokugqitywa phambi kombala wefanitshala, kodwa ukuba sele sele ukhethe iifenitshala zefenitshala kunye nemibala yokuhombisa, ipeyinti kufuneka incedise okanye idibanise nezinto ozikhethileyo.
Okwangoku kuthandwa i-greige, engumxube wegrey kunye ne-beige. Lo mbala ngumbala omnandi kwaye ocekeceke ongathathi hlangothi oya kudibanisa ngokulula nawuphi na umxholo. Unokuzama imibala efudumeleyo kunye nobumnyama beetoni zomhlaba, kuxhomekeke kwinkangeleko ofuna ukuyifumana.
Nazi imibala ethandwayo yepeyinti yomhlaba esetyenziswa ngokuxhaphakileyo kumagumbi okuhlala:
I-Shaker Beige (uBenjamin Moore) - umbala we-tone ye-mid-tone oya kubonakala ubalaseleyo kumbala wodonga ngokubanzi. Inendawo ephantsi, efudumeleyo eyenza ubushushu kunye nobushushu.
U-Antiquarian Brown (uSherwin Williams) - umbala we-rust-toned color onendawo ephantsi efudumeleyo eya kusebenza kakuhle njengombala wepeyinti.
Ilinen yendalo (uBenjamin Moore) - umbala weetoni okhanyayo olungileyo njengombala wodonga ngokubanzi olufihlakeleyo kwaye onokudala ukukhanya okuqaqambileyo
Umsila we-squirrel (uBenjamin Moore) - umbala omnyama, womhlaba ngombala ongwevu / ongathathi hlangothi okhangeleka njengombala oqaqambileyo kwaye uhambelana kakuhle namatye endalo
IColony Buff (uSherwin Williams) - umbala weetoni othambileyo womhlaba onomtsalane wabasetyhini
UBrevity Brown (uSherwin Williams) - lo mbala unesandi esiphantsi esibomvu ngenkangeleko yendalo esondele kakhulu kwimithi yemibala yemithi.
Icoconut Husk (uSherwin Williams) - omnye umbala omnyama omnyama onokuwusebenzisa njengombala ogqamileyo kunye nombala
Izikimu zemibala yeTone yoMhlaba yegumbi lokuhlala
Apha ngezantsi uyakufumana iindidi zamagumbi okuhlala aneetoni zomhlaba kulungelelwaniso lweendlela zoyilo.
Igumbi lokuhlala langoku libonelela ngokuhlala ngaphakathi ngaphakathi ngaphakathi. Iphalethi yombala ngumbala omdaka kwepeyinti yodonga kunye nefenitshala efanayo, xa kuthelekiswa nemithi yemithi emnyama, ii-ottomans ezimbini ezimdaka, itafile yekofu yomthi emnyama kunye nemilenze yokugxila.
Indawo yegumbi lokuhlala yangoku ibonisa uphahla lwayo oluphezulu ngombala wepeyinti oyintloko kunye nombala omdaka obomvu ngaphezulu kwendawo yomlilo. Umbala okhanyayo omdaka wejute kunye neewindows ezilinganayo ezidityanisiweyo kunye neziqwenga zefanitshala zomthi zibonelela ngeetoni ezininzi zomhlaba eziqiniswa ngakumbi yimithi emibini emikhulu yangaphakathi.
Kuyilo lwegumbi lokuhlala, iindonga zazipeyintwe ngombala we-taupe othambileyo ukuze unike ukukhanya kodwa kugqibe iitoni ezishushu. Udonga lweTV luba yindawo ekugxilwe kuyo kwigumbi njengoko lisebenzisa ipeyinti emnyama ye-beige, efanayo nekaSherwin Williams Nuthatch.
Indawo yokuhlala yanamhlanje enobeko oluvulekileyo ngumzekelo olungileyo wokusebenzisa imibala efihlakeleyo yetoni yomhlaba ukongeza isixa esifanelekileyo sobushushu kule ndawo yanamhlanje. Inkqubo ye- umbala wepeyinti kwigumbi lokuhlala isebenzisa umthunzi okhanyayo we-creme ukuyinika ukukhanya okuqaqambileyo. Ukusetyenziswa kokugqitywa kweenkuni kwi isilingi yetreyi i-accents kunye nokuvuleka kukongeza iitoni ezishushu zomhlaba kwisithuba.
Unokudlala ngokujikeleza kunye nokufezekisa ukujonga okufunayo. Ngelixa ukusebenzisa amatye / amatye yindlela yesiqhelo, inokuba ngaphezulu kohlahlo-lwabiwo mali lwabanye, isisombululo esikhawulezileyo nesisebenzisekayo sisebenzisa iipeyinti ezinombala kunye neendlela zokupenda. Kulo mzekelo, ipeyinti yaseVenetian enombala wentlabathi yayisetyenziswa eludongeni lwe-aksenti, ukuyinika ukuba ibe yinto entle kodwa elula.
Ukusetyenziswa kweetoni zomhlaba akuphelelanga kwimibala yakho yepeyinti, kodwa kunokusetyenziselwa ukugqitywa komthi wakho. Lo mzekelo ubonakalisa iitoni ezahlukeneyo kunye nemibala yeenkuni, apho ii-slats zodonga zaseMahogany ezimnyama zigqame kakhulu, zinika indawo isibheno sanamhlanje kodwa sendalo.
Ngaphandle kweepeyinti kunye nephepha lodonga, ukuba unayo uhlahlo-lwabiwo mali, unokwenza namatye amakhulu endalo ukuze usebenze njengomhlaba wakho wangemva weetoni. Indawo yokuhlala yeli xesha ineendonga zelitye lentlabathi eqinileyo ezidityaniswe neethayile zomgangatho we-beige.
Iindonga zeli gumbi lokuhlala ngumbala we-taupe ongathathi hlangothi wokunika umlinganiso kunye nokuthelekisa ngokuchasene nokugqitywa komthi omnyama ofunyenwe kumgangatho kunye nakwiziqwenga zefanitshala ezenziwe ngomthi. Iziqwenga zefanitshala ngaphakathi kwendawo zinento yokwenza i-creame-beige toned upholstery, edala umoya omtsha kunye nobushushu kwindawo.
Eli gumbi lokuhlala ngokwesiko libonelela ngeendlela ezahlukeneyo zetoni yomhlaba kubandakanya ukhuni olumnyama iminyango emibini, amalengalenga ansundu, imiqadi yeenkuni, imigangatho kunye nezinto ezahlukeneyo zefanitshala. Inkqubo ye- kwigumbi lokuhlala kwimigangatho elukhuni kunye nemiqadi yeenkuni izisa umtsalane we-rustic kwisithuba. Iipopu zombala zisetyenziswa kuyo yonke imihombiso ukomeleza uyilo kunye nokubonelela ngokwahlukileyo kwisithuba.
Ukugcina imeko yeklasikhi yezinto ezingaphakathi zokwakha zale ndawo, kusetyenziswa iziqwenga zefanitshala zeBaroque. Ukugqitywa kwepeyinti efudumeleyo etyheli yaseVenice kwakusetyenziswa ezindongeni nasesilingini, kugxininiswa ngamapaneli endalo amatye endalo kunye nokubumba okumnyama kweMahogany eluphahleni.
Uyilo oluhle oluvulekileyo lwegumbi lokuhlala lisebenzisa i-squirrel umsila ongwevu ngopende ngu-Benjamin Moore ukuze aqonde ngokufanelekileyo iithoni zomhlaba ezithobileyo. Yendalo Isandla somthi esenziwe ngamaplanga kunye nophahla lweplanga lomthi elidityaniswe netafile yekofu yomthi kunye neetafile zokuphela kunceda ukudala indawo yokuhlangana.
Iinkcukacha zokwakha zodwa zale ndawo zanele ukwenza ukubukeka okumangalisayo, kodwa imigca yanamhlanje kunye nejometri inikwa ubuntu obuninzi kunye nokufudumala ngokusetyenziswa komhlaba kugqityiwe i-oki yegolide kunye nodonga lwesitena.
Igumbi lokuhlala eliguqukayo lobufazi linokubukeka okuthambileyo kunye nokuqaqamba ngokudityaniswa kweendonga ezinemibala ye-tan kunye neepaneli ezimhlophe zomthi. Iifestile zaseFransi zokungcebeleka kunye nezinye iinkcukacha zokwakha zangaphakathi zongeza ngakumbi isibheno esihle kwesi sithuba.
Isandi esiphantsi esityheli esityheli sombala wodonga sinceda ithoni phantsi kombala omnyama weMahogany weengcango zomthi kunye nemiqadi efumaneka kwisithuba. Oku kunceda ukulinganisela ngaphezulu-konke ukubonakala kweenxalenye zefanitshala ezinkulu nezinombala omnyama kwisithuba.
izipho ezinkulu zebday zomyeni
Indawo yokuhlala yanamhlanje inikwa indawo efudumeleyo kunye necozier ngokusebenzisa isikimu sombala weetoni zomhlaba. Ukugcina ubuhle beli xesha, imibala yeetoni ezikhanyayo zathandwa, ezinje ngepeyinti ekhanyayo eludongeni. Iimpawu ezifihlakeleyo ezinee-undertones ezibomvu zazikwasetyenziselwa ukongeza umahluko kwisithuba, njengamakhethini anombala wobhedu kunye nombhoxo wendawo.
Eli gumbi lokuhlala lisebenzisa indibaniselwano elula yodonga olukhazimlisiweyo olukhanyayo, umgangatho omnyama omnyama kunye nodonga oluhle lwamatye e-beige, okwenza indawo evakala ilula ngokulingana okwaneleyo kunye nobuntu.
Uyilo lweli gumbi lokuhlala lisebenzisa ubukhulu becala iithowuni ezingwevu zinikwa ubushushu bokusetyenziswa kweethowuni zomhlaba ezifumaneka kwiziqwenga zeenkuni ze-Oak kunye nezixhobo ezikhoyo kwisithuba.
Uyilo lwegumbi lokuhlala lubandakanya umdaka ngombala omnyama wombala wepeyinti yodonga oluphambili ehambelana nomthunzi okhanyayo kwiisofa ezimbini. Ukugcina izinto zingabi mnyama kakhulu i-shades ezimnyama zahlukile kukhaphethi we-beige okhanyayo kunye nombhoxo wommandla, iipilo zomlomo kunye nesilingi yombala okhanyayo.
Igumbi lokuhlala elityebileyo lokuhlala linemibala eyahlukeneyo ukusuka kwi-beige yeendonga kunye nendawo yombhoxo, ukhilimu wokugquma iifestile kunye nombala omnyama wefanitshala yesikhumba.
Uyilo lwegumbi lokuhlala elinemonochromatic lubonisa udonga lwe-beige kunye nodonga lwepeyinti enefenitshala efanayo kunye neefestile zokugquma. Unako ukufezekisa uyilo lwe-monochromatic ngokukhetha umbala omnye wesiseko kwaye usebenzise i-shades kunye neetintshi zazo kwezinye iinkcukacha kwigumbi.
Eli gumbi lokuhlala lanamhlanje linombala ofudumeleyo wombala kunye nokuhonjiswa kwemibala emdaka ukwenza uyilo oludibeneyo.
Kule ndawo, iinkuni zendalo zigqiba eluphahleni kwaye ukutyibilika sele kwenza uninzi lwethoni yomhlaba yindawo. Ngokwahlukileyo, iindonga zazipeyintwe ngombala oluhlaza okhanyayo zinika isibheno seediliya.
Uyilo lwegumbi lokuhlala loyilo ludwebe iindonga ze-shiplap ezinombala we-beige, i-flooring yeenkuni, indawo yokubasa ngamatye kunye nomdaka omkhulu isingqengqelo secandelo .
Ukubonisa uluhlu lweetoni zomhlaba, oku igumbi lokuhlala elisemthethweni izisa umbala ngokusetyenziswa kwayo kwamalaphu atshisiweyo eorenji kunye namdaka, iphosa imiqamelo kunye nezinto zendlu. Indawo enkulu yombhoxo wombindi wokuhlala ophakathi kunye nokudibanisa ukujongwa kweesofa kunye nesihlalo.
Eli gumbi lokuhlala lihleliyo linika imibala yeplanga kubandakanya isilingi esimdaka kunye nomgangatho woqalo. Isitulo solawulo lwe-ribbed yala maxesha sizisa umbala wombala kolu loyilo lombala ongathathi hlangothi. Fumana ngakumbi imibono yegumbi lokuhlala kweli phepha legalari.
inyathelo ngenyathelo ukwenza isaphetha
izipho zomntakwabo emthethweni
ishawa kunye nebhentshi
Indlela yokuziphatha yomtshato xa unika